नेपालीकी छोरि आस्था : कोरियामै पिएचडी, मन्त्रालयको उच्च अधिकारी, दर्जनौँ नेपालीलाई रोजगारी ! – AB Sansar
November 11, 2020 November 11, 2020 adminLeaveaComment on नेपालीकी छोरि आस्था : कोरियामै पिएचडी, मन्त्रालयको उच्च अधिकारी, दर्जनौँ नेपालीलाई रोजगारी !
काठमाडौ । आज हामी नेपालीको सफलता विश्वभरी नै सगरमाथाको उचाई बराबर चुलिएको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैछौ । नेपालीहरु विश्वभरी साधारण मजदुरको रुपमा मात्र कार्यरत छैनन् । विश्वकै प्रतिष्ठित पदमा पनि पुगेका छन् । विश्वका कयौँ देशका उच्च अधिकारीको रुपमा आफुलाई पुर्याउन सफल नेपाली छोरी आस्था बिन्दु मल्लको बारेमा आज हामी यो सामाग्री प्रस्तुत गर्दैछौ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
यतिमात्र हैन उनी कोरियाको चर्चित व्यबसायी हो । दक्षिण कोरियामा लगभग छ करोड रुपैयाँ लगानीमा तीन ठाँउबाट होटल संचालन गरेकी उनले कोरिया सरकारलाई बार्षिक पच्चिस लाख नेपाली रुपैया कर भुक्तान गर्छिन भने दुई दर्जनका हाराहारीमा नेपाली युवायुवतीलाई रोजगारी दिएकी छिन् । हाम्रो भेटमा उहाँ एकदमै सरल र साधारण व्यक्तित्व भएको पयौँ ।
नेपाल सुर्या बाट साभार ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
परिक्षा आउन १३ दिन मात्र बाँकी रहँदा कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुलाइ एकाबिहान आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
रत्न बानियाको अ’न्त्ष्टिमा पुगेका कृष्ण कंडेलले यसरी ढोगेर गरे अन्तिम बिदाइ, बलियो खम्बा ढल्यो भन्दै सबै रोए
बैतडीमा भीरबाट लडेर किशोरीको मृत्यु
August 17, 2021 Ab-संसार